परिवार यात्रा | सेमोर, IN | ज्याक्सन काउन्टी आगन्तुक केन्द्र
23 सक्छ, 2022 812.524.1914
यो हामी हौ
कार्यक्रमको योजना बनाउनुहोस्
यस महिना ज्याक्सन काउन्टीमा के भइरहेको छ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
जैक्सन काउन्टीमा नयाँ के छ भनेर जारी राख्नुहोस्।
हाम्रो चाडपर्व र घटनाहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
हाम्रा चाडपर्वहरू र घटनाहरू
सबै विशेष घटनाहरू हेर्नुहोस् क्यालेन्डरमा मिति चयन गरेर वा पूर्ण सूचीको लागि रातो पट्टी क्लिक गरेर।
साहसिक सुरु हुन्छ
ज्याक्सन काउन्टी, IN
बाहिरी मनोरञ्जन क्षेत्रहरू र पारिवारिक मैत्री गतिविधिहरूको ठूलो संग्रहको साथ, आगन्तुकहरूले ज्याक्सन काउन्टी आगन्तुक केन्द्रमा हामीलाई सम्पर्क गरेर गतिविधिहरूको दायरा फेला पार्न सक्छन्। यसलाई कुनै पनि दिशामा सजिलो यात्रा बनाउँदै, हामी इन्डियानापोलिसको एक घण्टा दक्षिणमा, लुइसभिलको एक घण्टा उत्तरमा, KY, सिनसिनाटी, OH बाट एक घण्टा, र ब्लुमिङ्टन र नासभिल, इन्डियानाबाट हप-स्किप-एन्ड-जम्प छौं। केवल अन्तरराज्यीय 50 बाट बाहिर निस्कनुहोस् 65 लिनुहोस् र हामीलाई भेट्नुहोस्। हाम्रो पारिवारिक मैत्री घटनाहरू र चाडपर्वहरूको विस्तृत श्रृंखला, तपाईंलाई अविस्मरणीय क्षणहरू सिर्जना गर्न सम्भव बनाउनुहोस्। हामी तपाईंलाई जैक्सन काउन्टी, इन्डियानामा तपाईंको अर्को साहसिक यात्राको योजना बनाउन आवश्यक पर्ने सबै जानकारीको लागि हामीलाई तपाईंको गो-टु बनाउन प्रोत्साहन दिन्छौं। ज्याक्सन काउन्टीको सानो मार्गनिर्देशनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
हाम्रो सानो शहर
1850 मा प्लेट गरिएको, यो सानो समुदायले आफ्नो सम्पदामा गर्व गर्छ। राज्य सडक 58 र 135 मा बसेर, तपाईं फ्रीटाउन-पर्शिंग संग्रहालयबाट7ज्याक्सन काउन्टी बाइसन सहित धेरै खजानाहरूको घर, आइसक्रिम पसल वा सार्जेन्टमा टहल्न सक्नुहुन्छ। रिकको अमेरिकी क्याफे र बीबीक्यू। सुन्दर ग्रामीण इलाका अन्वेषण गर्नुहोस् साल्ट क्रिक वाइनरी र एक सुन्दर परिदृश्य दृश्यमा लिँदा तिनीहरूको पुरस्कार-विजयी वाइनको स्वाद लिनुहोस्।
यो समुदायले मनाउँछ कि यो काउन्टी सीट र समृद्ध इतिहासको घर हो जहाँ काउन्टी अदालतले समुदाय र वरपरका काउन्टी भरिका सबै ऐतिहासिक साइटहरूको लागि मातृवाहक हो। समुदाय पुरस्कार-विजेता को घर हुन मजा छ ज्याक्सन काउन्टी फेयर. ब्राउनस्टाउन US50 मा विराजमान छ, जुन एक तट-देखि-तट राजमार्ग हो र पूर्व र पश्चिम ट्रान्जिटको लागि मुख्य मार्ग हो। जैक्सन-वाशिंगटन राज्य वन र Hoosier राष्ट्रिय वन को प्राकृतिक पहाडहरु मा बस्दा, यो I-10 बाट मात्र 65 मिनेट छ।
I-65 र US 31 मा केवल छिटो जम्प, क्रिदर्सभिले उनीहरूको गर्व वाघ र उनीहरूको वार्षिक हो रातो, सेतो र नीलो उत्सव. त्यो पर्वले देशभक्ति र अमेरिकी झण्डा मनाउँछ। यो पहिलो पटक 1976 मा भएको थियो जब संयुक्त राज्यले आफ्नो द्विशतवार्षिकी मनाएको थियो। हामाचर हलले यस सम्पन्न समुदायको मुटुमा भूमिका खेल्छ। यस ऐतिहासिक स्थलमा धेरै सामुदायिक घटनाहरू र कहिलेकाहीँ डिनर थिएटरको आनन्द लिन सकिन्छ। रेस्टुरेन्ट र पसलहरु संग Peppered, यो ज्याक्सन काउन्टी आतिथ्य मा हाम्रो दक्षिणी साझेदार हो।
सेमोर सजिलै एक्जिट I० मा I-, 50, US ,०, US and१ र इंडियाना ११ मा सजिलैसँग पहुँचयोग्य छ। मेडी डब्ल्यू। शिल्ड्स र उनकी श्रीमती एलिजा पी शिल्ड्स अप्रिल २ 65, १ 50२ मा सेमोर शहरको प्लेट्ट पंजीकृत गरे। सेमोर द्रुत रूपमा बढ्यो। १ 31 11 मा ओहायो र मिसिसिपी रेलमार्ग को थप र चाँडै जैक्सन काउन्टीको सबैभन्दा ठूलो शहर भयो। सेमोरले उद्योग, शपिंग, लजिंग, भोजन र उत्कृष्ट उत्सवहरू र कार्यक्रमहरू समावेश गर्दछ सेमोर अक्टोबरफेस्ट, जो जैक्सन काउन्टी को जर्मन विरासत को श्रद्धांजलि दिन्छ। Rock'n रोल हॉल अफ फेम inductee जोन Mellencamp Seymour मा जन्म भएको थियो, र आगन्तुकहरु समुदाय भर मा धेरै स्थलचिन्ह अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ। सेमोर स्थानीय, कुख्यात रेनो गिरोह द्वारा संसारको पहिलो चलिरहेको रेल डकैती को साइट हो। यहाँ क्लिक गरेर कथा को एक भिडियो हेर्नुहोस्। एक महान शहर अवसरहरु को एक विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछ तर त्यो सानो शहर अनुभूति गुमाउँदैन।
मेडोरा ज्याक्सन काउन्टीको दक्षिणपश्चिमी किनारमा अवस्थित छ र लुकाउने दृश्यहरू र त्यो सानो शहरको अनुभव प्रदान गर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा लामो तीन स्प्यान कभर ब्रिजबाट रोक्नुहोस्, इंडियाना 235 मा अवस्थित वा ऐतिहासिक मेडोरा ब्रिक प्लान्ट हेर्नुहोस्। द फ्रेन्ड्स अफ द मेडोरा कभर्ड ब्रिजले ब्रिजमा वार्षिक डिनरको आयोजना गर्दछ, जुन मौन लिलामी र मनोरन्जनको अतिरिक्त पुलमा एक अद्वितीय भोजन अनुभव हो। डिनरको बारेमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। मेडोरा आतिथ्यको प्रतीक हो र त्यो समयमा स्पष्ट छ मेडोरा गुलाबी उत्सवमा जान्छ अक्टुबर वा मा मेडोरा क्रिसमस महोत्सव डिसेम्बर मा मेडोरा अमेरिकी or० वा इन्डियाना २50 बाट पहुँच योग्य छ।
भ्यालोनिया ज्याक्सन काउन्टीमा पहिलो बस्ती थियो र राज्यको पहिलो क्यापिटल हुनको लागि पनि दौडमा थियो। भल्लोनिया काउन्टी सीट भन्दा बाहिर अवस्थित छ र इण्डियाना १ 135 बाट पहुँचयोग्य छ। फोर्ट भाल्लोनिया १all०० को शुरुमा भल्लोनियाको इतिहासको सम्झना हो र अक्टुबरमा जीवितै भयो फोर्ट भालोनिया दिवस उत्सव। पहाडहरू र घुंडीहरू भल्लोनिया र धेरै फार्म मार्केटबाट देख्न सकिन्छ र उत्पादन स्ट्यान्डहरू वरपर फेला पार्न सकिन्छ, जो स्वादिष्ट क्यान्टलाप र तरबूजको लागि परिचित छ।
ज्याक्सन काउन्टीको इतिहास पत्ता लगाउनुहोस्
60० बर्ष भन्दा बढीको लागि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आकर्षणमध्ये एक ब्राउनस्टाउन स्पीडवे हो, जुन जैक्सन काउन्टी फेयरग्राउन्डमा अवस्थित छ। दौडहरू फोहोर ट्र्याकमा वर्षको आठ महिना बाहिर आयोजित गरिन्छ, र हामी विभिन्न वर्गहरू प्रस्ताव गर्दछौं। आगन्तुकहरूले जैक्सन काउन्टीको इतिहास हाम्रो कुनै पनि छवटा संग्रहालयमा पनि अन्वेषण गर्न सक्दछन्, फ्रिम्यान फिल्ड आर्मी एयरफील्ड संग्रहालय र फोर्ट भलोनिया संग्रहालय सहित। इतिहास प्रेमीहरूले जैकसन काउन्टी भूमिगत रेलमार्गमा खेलेको भूमिका पत्ता लगाउन सक्दछ, जसले भागिएका दासहरूलाई स्वतन्त्रतामा पुग्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ थुप्रै ऐतिहासिक मार्गहरू, आवरण पुलहरू, र दर्शकहरूलाई आनन्द लिनको लागि गोलो बारहरू पनि छन्।
कला प्रेमीहरूले रमाइलो गर्छन्
स्थानीय कला दृश्य
कला प्रेमीहरूले ज्याक्सन काउन्टीको विविध कलात्मक संग्रहहरूमा भ्रमणहरूको मजा लिनेछन्। कलाको लागि दक्षिणी इंडियाना केन्द्र, स्वाप कला संग्रह, र कलाको लागि ब्राउनटाउन कोष सबै क्षेत्रको संस्कृतिमा योगदान पुर्‍याउँछन्। आगन्तुकहरु हाम्रो समुदाय थिएटरहरु मध्ये एक मा एक कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्छन् र अधिक स्थानीय कलाकारहरु हेर्न कारीगर ट्रेल यात्रा गर्न सक्दछन्।
कला दृश्य हेर्नुहोस्
यसको उत्कृष्टमा आउटडोर मनोरन्जन
हाम्रो बाहिरी उत्साहीहरूका लागि, ज्याक्सन काउन्टीले मनोरन्जन विकल्पहरूको संख्या प्रदान गर्दछ। मस्क्याट्याक राष्ट्रिय वन्यजीव शरणार्थीले शिकार, माछा मार्ने र पक्षी हेर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। चाहे यो जैक्सन-वाशिंगटन राज्य वनमा होस्, ताराम खाली होलो स्टेट रिक्रिएसन एरिया वा हूसीयर नेशनल फॉरेस्ट तपाई केवल घर-टाढा घर रोमांचका लागि शिविरस्थल छान्न सक्नुहुन्छ। बाइक चलाउने, पैदल यात्रा र घोडा सवारी यी अछूत क्षेत्रहरू भ्रमण गर्ने लोकप्रिय तरिकाहरू हुन्, किनकि ती सयौं हजार एकडहरूमा फैलिएका छन्। खेल-झुकाव आगन्तुकका लागि हामी उत्कृष्ट गोल्फिंग पनि प्रदान गर्दछौं।